Previous SEC: KA NDI NAIJIRIA KWUSI ITINYE EGO NA PONZI
Next MINISTA NA-AHU MAKA UGBOELU KPUGHERE MBA NIGERIA AIR
“A na-eme atụmatụ nchịkọta ntuli aka nke 2019 na N242,445,322,600.00, ma naanị N164,104,792,065.00 ga-eji maka mkpa ngwa ngwa nke ntuli aka n’ihi nsogbu ego, ” President Muhammadu Buhari kwuru na ụnyaahụ.
N’akwụkwọ ozi onyeisi oche nke Senate Bukola Saraki gụrụ ndị nnọchiteanya na mmalite nke nnọkọ ụnyaahụ, Buhari rịọrọ na ọnụego nke N228,854 ijeri nke N578,319 ijeri uru nke ‘Ntinye aka’ tinye aka na ngwugwu 2018 ma ọ bụ gbanwee maka nzube nke inye ego nhoputa.
Nke a ga-enyekwa ego ọrụ N64,749 dị oké ọnụ ahịa, bụ nke nzukọ ahụ kwụsịrị na mmefu ego.
Akwụkwọ ozi a, nke a na-akpọ, ‘Arịrịọ maka Mbupụ na Ntinye 2018 Budget’, na-agụ, sị: “Dịka ị maara, a ga-eme atụmatụ ntuli aka 2019 na mbido 2019.
Iji hụ na e mere ndokwa zuru ezu maka nhoputa ndi ochichi n’efu na ndi ikpe ziri ezi, ọ dị mkpa iji ego kwesịrị ekwesị iji mee ka ụlọ ọrụ ndị dị mkpa malite ịkwadebe. INEC na ụlọ ọrụ nchebe ka ha nyere arịrịọ ha n’oge na-adịbeghị anya.
A nabatara nke a na nyocha nke mmefu ego. A na-eme atụmatụ nchịkọta ntuli aka n242,445,322,600.00. ”
Ọ gbakwụnyere, sị: “N’ihe mgbochi nrụgide ego na-arịwanye elu, ana m atụ aro na a ga-enye N164,104,792,065.00 site na nnyefe ma ọ bụ itinye ego nke mmefu ego 2018.
M na-ekwu na N78,340,530.535.00, bụ nke kachasị na-akwụ ụgwọ ọrụ maka ndị ọrụ, mmanụ ụgbọala na ụgwọ ndị ọzọ agaghị achọrọ ruo mgbe a ga-ahọrọ ntuli aka, ka e nyere gị na mmefu ego 2019. ”
Ka ọ dị ugbu a, na okwu mmeghe ọ kpọpụtara ụnyaahụ n’oge ememe ncheta nke 20 nke Ụlọikpe Criminal International (ICC), Hague, Holland, Buhari kwughachiri nchịkwa nke nchịkwa ya iji mee “ihe niile ga-eme iji hụ na ndị Nigeria na-agba akaebe nke omume n’efu, ezi ntuli aka na udo na 2019. ”
Onye isi oche a na-akpọ maka ihe omume ahụ na-egosi ntinye nke ICC Rome Statute, o kwuru, sị: “N’adịghị ka ọdachi ndị mere na ntuli aka ntụle ntuli aka 2011 na Nigeria, nke mere ka Ụlọikpe Na-ahụ Maka Mmebiiwu Na-ahụ Maka Mpụ na-eme nchọpụta mbụ, ana m agwa gị na aka niile nọ na oche iji gbochie nlọghachi nke ọdachi ndị dị otú ahụ.
“Otu ICC siri ike ma dị irè pụkwara ime ka ndị ọzọ na-eme mgbalị ikpe ziri ezi, na-agbasawanye ohere nke ịza ajụjụ.
Ndị a nwere ike ịgụnye nrụrụ aka dị njọ nke ndị na-eme obodo na-emebi mmepe mmepe nke mba ma na-atụba ndị amaala aka ịda ogbenye.
Ndị a nwere ike ịgụnye ikpe gbasara ego na-ezighị ezi ebe mba na-egbochi ma ọ bụ ịghaghachi azụ nke akụ efu. Dị ka Onye Ọchịchị n’Africa nke Na-emegide Nrụrụ Aka, ihe ndị a dị m n’obi. ”
O kwuru na nkwado na nkwado nke Naijiria maka ụlọikpe ahụ “sitere na nkwenye anyị siri ike na nkwanye ùgwù maka iwu nke iwu na ikike ụmụ mmadụ, na ntinye aka anyị siri ike na nnwere onwe nnwere onwe dị iche iche na mba dị iche iche na nke anụ ụlọ, ihe mgbaru ọsọ iji guzobe Ụlọikpe. ”
O kwuru na Naijiria gosipụtara obi ike ya na ụlọ ikpe site na “nkwado zuru oke na nke a na-arụkọ ọrụ” banyere ihe ndị a na-enyocha na na “ọtụtụ okwu obodo n’oge nnọkọ nke Ụlọikpe.”
Buhari gwara ụlọ ikpe ahụ ka “ịbanye na nyocha niile na-arụpụta ihe ma na-atụ egwu na nchegbu na-atụgharị uche site na iji ozi ezigara ya, ịmara ihe na mgbanwe ndị a ga-eme mgbanwe ụfọdụ.”
“Ọ bụrụ na a kwadoro nke ọma, nkwurịta okwu na ịzụlite ihe ọmụma ga-eme ka ntụkwasị obi tụkwasị obi ma kwalite nkwado dị ukwuu nke òtù ndị otu na Ụlọikpe na ọbụna na-agba ndị na-abụghị ndị òtù America ume ịhọrọ ịghọ Ndị.
Ọ ghaghị izere ihe ngosi nke enweghị isi ma ọ bụ nkwalite ndọrọ ndọrọ ọchịchị. ”
Ugbua na-ekwu na ha emeghị otú ahụ iji kwado ụkpụrụ Rome nke ICC, nke mere na ọ nwere ike ịghọ nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ, Buhari kwuru, sị: “Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihe mgbaru ọsọ na ibu ọrụ nke Ụlọikpe ahụ bụ ihe ịma aka ma dị egwu.
Ma site na nkwado nke mmadụ nile, yana nnukwu ụlọikpe nke ndị ikpe na ndị ọrụ nke Ụlọikpe ahụ, nsogbu ndị a anaghị enwe ike imeri.
Ya mere, m na-agwa mba nile ka ha ghara ịkatọ mkpebi nke Ụlọikpe mana ka ha na-eburu n’uche ihe kpatara ya iji guzobe Ụlọikpe na mbụ. ”
O kelere onyeikpe Chile Eboe-Osuji maka nhoputa ya dika onye isi nke ICC, na-akọwa ya dika “nwa nwoke a ma ama nke Naijiria.”
Ihe karịrị ndị isi 25 dị elu nọ na-aga nnọkọ ahụ. Ha gụnyere President nke Assembly nke States States na Rome Statute, O-Gon Kwon; Onye ikpe ICC Fatou Bensouda, ICC na-edebanye aha Peter Lewis, UN Legal Consultancy Miguel de Serpa Soares na ndị ọzọ.
Ma ndi mmegide ndi otu ndi PDP (PDP) weghaara ohere nke nleta iji mee ka ndi mmadu kwuru na ha nwere ikike ime ihe na Naijiria, na-acho ICC ka ha kwue Buhari.
N’okwu a kpụpụrụ Monday site n’aka onye ọnụ na-ekwuchitere ya, Kola Ologbondiyan, o kwuru na “a na-edepụta ikike zuru oke nke ụwa na mba Nigeria, karịsịa, Ngalaba Nọọmentị United States 2017 Human Right Report, bụ nke depụtara mbipụta nke mmegbu na ikpe na-akwadoghị; enweghi ihe ndi ozo na ndi mmadu na enweghi mmekorita na ndi mmadu ajuju, karia ebe ndi eji eji ha na Naijiria n’okpuru nlekọta a. ”
Ndi otu a boro Buhari ka o kwue ochichi ya na ulo ikpe banyere ebubo ebubo megide ndi mmadu na igbu mmadu n’okpuru ochichi ya.
Ọ na-echeta na ọ bu ụzọ tinye akwụkwọ na mkpesa n’aka United Nations megide onyeisi oche maka mmebi iwu ndị a na-eme na mba ahụ, na-emesi ike, sị: “Ihe onyeisi ndị isi na-achọ zoo n’aka ndị Naijiria bụ na ICC Rome Statute na-eme ihe banyere mpụ dị egwu megide ụmụ mmadụ na mgbukpọ, nke juputara na Naijiria n’okpuru nlele nke Bugu. “
Buhari election hot iheneme IHENEME NOBODO ihenemenobodo Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST money muhammadu new news nobodo politic political POLITICS president update vote